ဆန်ပြုပြင်စက်စက်၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုရှိပါသည်,ဆန်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ရေးစက်၏အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ကိုကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝနားလည်ရန်လိုအပ်သည်, သိပ္ပံနည်းကျဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးမဟာဗျူဟာကိုရေးဆွဲထုတ်လုပ်သည့်စက်၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်တိုးတက်စေရန်ဆောင်ရွက်သည်။ ဆန်စက်လည်ပတ်ခြင်းစက်၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုသည်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရုံသာမကဆန်ထုတ်လုပ်သည့်စက်၏သက်တမ်းကိုလည်းတိုးမြှင့်နိုင်သည်။, ဒါပေမယ့်လည်းအော်ပရေတာကစစ်ဆင်ရေးအတွင်းမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားမှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ခွင့်ပြုပါ.
1.အပေါ်နှင့်အောက်ပိုင်းမှိုတိုက်ဆိုင်မှုနှင့်ကြံ့ခိုင်မှုကိုစစ်ဆေးပါ, တည်နေရာကိရိယာလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ. လေထုစတင်လည်ပတ်ပြီးနောက်ဆန်ထုတ်စက်2မိနစ်များ, ပုံမှန်မဟုတ်သောအသံသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိပါကချက်ချင်းရပ်တန့်သင့်သည်, ပြtroublနာဖြေရှင်းလိမ့်မည်, ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်သည့်ဆန်စပါးထုတ်လုပ်သည့်စက်အထိဖြစ်သည်.
2. ဆန်ပြန်လည်မိတ်ဆက်အခါ, ပါဝါကိုပိတ်ထားခြင်းနှင့်ရပ်တန့်ရမည်ဖြစ်သည်. ဘယ်အချိန်မှာ ဆန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ အလုပ်လုပ်နေတယ်, စက်၏နောက်ဘက်ကိုရပ်တည်ရန်ခွင့်မပြုပါ. ဆန်ပြုပြင်စက်သည်ပုံမှန်မဟုတ်ပါ, ဆုံးမပဲ့ပြင်သင့်တယ်. ဆန်စက်ပြုပြင်ရန်အတွက်လက်ကိုတင်းကြပ်စွာတားမြစ်သည်, လက်ဒဏ်ရာကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်.
3.ဆန်သန့်စင်စက်ကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာလည်ပတ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုတင်းကြပ်စွာလိုက်နာပါ, အလုပ်သမားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများကို ၀ တ်ဆင်ရန်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပြဌာန်းချက်များအရ. မော်တာကိုဂရုတစိုက်စစ်ဆေးမစတင်ခင်, ခလုတ်များ, လိုင်းများနှင့်အခြေခံပုံမှန်ပါပဲ, အစိုင်အခဲပြည်နယ်, အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများ၏စက်မှုထိန်းချုပ်မှုစစ်ဆေးပါ, ခလုတ်များ, စသည်တို့. မှန်ကန်သောတည်နေရာ၌ရှိကြ၏.
ဘက်စုံနားလည်မှုနှင့်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ofကိုအသေးစိတ်လေ့လာခြင်း ဆန်စပါးထုတ်လုပ်ရေးစက် နှင့်၎င်း၏သက်ရောက်မှု, နှင့်သိပ္ပံနည်းကျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတန်ပြန်ရေးဆွဲ. စပါး macro-control ကောင်းကောင်းလုပ်ရန်အစပျိုးမှုအတွက်ဆန်ပြုပြင်စက်, ဆန်နှင့်ဝယ်လိုအားဟန်ချက်ညီစေရန်, နှင့်တရုတ်စီးပွားရေး၏ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်အလွန်အရေးကြီးသောအဓိပ်ပာယျရှိပါတယ်